Steel ji kpachie oghere, Steel driveway ji kpachie oghere, Marine-eje ije Steel ji kpachie oghere - Jiulong
Ụgha ji kpachie oghere Panel
Igwe ndobe & Stanchion
Special ji kpachie oghere Panel
Stock ji kpachie oghere Panel
Professional ji kpachie oghere ngwọta soplaya. Top ji kpachie oghere emeputa ke China.
Rịọ onye iji
Na-enye a dịgasị iche iche nke Products
Mmadụ Bịa ka anyị ụlọ ọrụ
bụ otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta bụ ọkachamara na-amị pịa-welded ígwè ji kpachie oghere dị China. Emi odude ke ọwọrọetop n'ọdụ ụgbọ mmiri n'obodo -Ningbo.
Ọ nwere adaba okporo ụzọ na elu ebe na na 30 na-ewe nkeji Mbo Ningbo Lishe International Airport na naanị 25-nkeji Mbo Ningbo Port-ama mba oké osimiri mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na uru nke na-abụghị silting, miri-mmiri na ice-free niile afọ gburugburu.
2020年4月8 日， 浙江省商务厅王坚厅长一行来我司宁波九龙机械制造有限公司调研指导工作。 在新冠疫情全球蔓延日益严峻， 并严重影响浙江出口经济的情况下， 如何发展2020年外贸出口成为了浙商的头等任务。 省委省政府及地方政府将大力支持各大中小型企业的发展， 并在政策和税收上予以大幅优惠扶持。 为疫情后的经济复...
ewusi welder ọrụ ọzụzụ t ...
Adress: Jiulong Lake Industrial Mpaghara, Zhenhai District, Ning bo City, Zhejiang
Ajuju e kwuru